गर्भावस्था एक जटिल अवस्था हो । यस बेलामा शिशुको विकासका लागि विशेष ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । झन् IVF गराएर गर्भ बसेको छ भने त दम्पतिहरु हरेक सा-साना कुराको ख्याल गर्छन् किनभने निकै प्रयास पश्चात गर्भ बसेको हुन्छ । तर यस्तै अवस्थामा विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारी फैलँदा सबैमा त्रास फैलनु स्वाभाविक हो । विभिन्न श्रोतबाट विभिन्न कुरा सुनिन्छ र त्यसले डर र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्दछ ।
यस अवस्थामा हाम्रा मनमा विभिन्न कुराहरु खेल्नु स्वाभाविक हो तर यसबेला विश्वसनीय श्रोतबाट आएको जानकारीलाई मानेर सक्दो तनावरहित वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ । यस बेला तपाईंका मनमा आउन सक्ने मुख्य-मुख्य कुराहरु तल समावेश गरेका छौं ।
के गर्भवती महिलामा संक्रमणको सम्भावना अधिक छ?
सामान्यतया: गर्भावस्थामा विभिन्न शारीरिक परिवर्तन आउने हुनाले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली कम्जोर हुन पुगेको हुन्छ जस्ले गर्दा विरामी पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ तर हरेक रोगको प्रवृति फरक भएको कारण यकिनका साथ केहि भन्न सकिने अवस्था छैन ।
विगतमा फ्लु र अन्य कोरोना जस्ता संक्रमणका कारण गर्भतुहिने र समयावधि भन्दा पहिले नै सन्तान जन्माउने समस्या पाइएपनि कोरोनाका कारण नै यस्तो भएको यकिन गरेर भन्ने सकिने अवस्था छैन । हाल कोभिड-१९ का कारण कुनै गर्भवती महिलाको मृत्यु भने भएको छैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार १४७ जना संक्रमित गर्भवतीमध्ये केवल ८ प्रतिशतमा गम्भीर लक्षण भेटिए र केवल १ प्रतिशत सिकिस्त बिरामी परेको भेटिए। एउटा बिरामीलाई मात्र मेकानिकल भेन्टिलेसन चाहियो जसमा सिजेरियन सेक्सन गरेपछि उनको अवस्थामा सुधार आयो।
के कोभिड-१९ आमाबाट गर्भमा रहेको बच्चामा सर्छ ?
हालसम्म कोभिड-१९ बाट ग्रसित गर्भवती महिला धेरै नभएको कारण, यसको प्रभाव बारे कुनै ठोस तथ्यांक छैन तर विगत केहि दिनमा १ जना शिशुमा मात्र संक्रमण सरेको देखिएको छ । धेरैमा भने यो नसरेको पाइयो ।
चीनमा ९ जनामा गरिएको एक सानो सर्वेक्षणमा कोभिड–१९ संक्रमित आमाहरुबाट एमनिओटिक फ्ल्युड, कर्ड रगत, नवजात शिशुको घाँटीको स्वाभ र आमाको दूधको परीक्षण गरियो तर सबै भाइरस संक्रमणका लागि नकारात्मक देखिए ।
USCDCI ले केहि रिपोर्टका आधारमा आमाको दूधबाट पनि कोभिड-१९ नसर्ने बताएको छ तर अरु खतराहरु भने हुन सक्छन् ।
के कोभिड-१९ लागेका महिलाबाट जन्मिने सन्तान दीर्घ रोगी हुन्छन् ?
कोरोना भाइरस सँग मिल्दोजुल्दो SARS, MERS आदिको आधारमा गर्भपतन, समय अगाडि नै बच्चा जन्मिने, मृत शिशु जन्मिने सम्भावना अधिक हुन सक्छ र गर्भावती भएको पहिलो त्रैमासिकमा ज्वोरो देखिए खतरा अझै बढ्न सक्ने कुरा कतिले भन्दै गर्दा केहि विज्ञहरुले कोभिड-१९ र विगत SARS, MERS को तथ्यांकका अनुसार यिनीहरुबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको जनाएका छन् ।
डेलिभरी को बेलामा आमा कोभिड-१९ संक्रमित भेटिए के गर्ने ?
डेलिभरीको समय नजिक छ र तपाईंलाई कोरोना लागेको शंका छ भने सर्वप्रथम स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराउने । यसो गर्दा उनीहरुले कोभिड-१९ भए-नभएको जाँच गर्न सक्छन् र कोभिड-१९ भएको ठहरिएमा पनि नवजात शिशुमा त्यसको संक्रमण कम गर्ने प्रयास गर्न सक्छन् ।
यस अन्तर्गत संक्रमणको अवस्था भए आमा र शिशुलाई अलग राख्ने र संक्रमणको जोखिम कम भए संगै राख्न पनि सकिन्छ । संगै राखेको अवस्थामा भने आमा र शिशुबीच कपडाले दूरी बनाउने, छुनु अधि हात धुने, मुखमा मास्क लगाउने जस्ता कार्य गर्न सकिन्छ ।
कोरोना संक्रमित आमाले स्तनपान गराउन मिल्छ ?
कोभिड-१९ संक्रमित व्यक्तिको नाक वा मुखबाट निस्किएको तरल पदार्थको कणबाट फैलिने भएकोले कोभिड-१९ संक्रमित आमाले स्तनपान गराउंदा कुनै हानी नहुने देखिन्छ तर यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिनु उचित देखिन्छ । यदि आमा र शिशुलाइ अलगै राखिएको छ भने पम्पको सहयोग लिएर सफा भाँडामा आमाको दूध सङ्कलन गरेर ख्वाउनुपर्छ । संक्रमणको जोखिम कम भए राम्ररी हात धोएर तथा मास्क लगाएर स्तनपान गराउन पनि सकिन्छ ।
के बच्चाहरुमा कोभिड-१९ को जोखिम अधिक छ ?
थोरै उपलब्ध तथ्यांकका अनुसार केहि बच्चाहरुमा कोभिड-१९ को संक्रमण देखिएपनि अधिकांश वयश्क र वृद्धमा यसको प्रकोप बढी रहेको देखिन्छ । बच्चाहरुमा जटिल समस्या कमै भेटिएको छ ।
खास गरी गर्भवती महिला र IVF गराइ रहेका महिलाले निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
आफूलाई सक्दो रोग लाग्नबाट बचाउने
घरभित्रै बस्ने र सक्दो कम यात्रा गर्ने
कसैलाई छुँदा राम्ररी साबुन पानीले हात धुने र कम्तिमा ६०% अल्कोहोल भएको स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने
घरका सामानहरु सफा राख्ने र स्प्रे वा साबुनयुक्त पदार्थले निर्मूल पार्ने
खानपिनमा रोगसँग लड्न मद्दत पुर्याउने वस्तुको सेवन गर्ने
कसैलाई रुघा-खोकी भएमा मास्क लगाउन लगाउने
कोभिड-१९ नयाँ किसिमको महामारी भएको कारण यस सम्बधि विभिन्न प्रयोग र अनुसन्धान भइरहेको छ । यकिनका साथ केहि भनिहाल्ने अवस्था पनि छैन । यस विरुद्धको खोप बनाउने कार्यमा वैज्ञानिकहरु जुटिरहे पनि अहिले परीक्षणमा नै समय लाग्ने छ त्यसैले अहिलेको अवस्थामा आफुलाई सक्दो रोग लाग्न नदिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।
विश्वभर फैलिएको कोरोनाको प्रकोपले हाम्रो जीवन छत्-विछत् भएको छ । अतिआवश्यक वस्तु/सेवा बाहेक अरु सबै कुरा ठप्प छन् । मानिसहरु सामाजिक दूरी कायम गरेर...